क्या राम्रो कालिञ्चोक ! [फोटोफिचर]- फोटोफिचर - कान्तिपुर समाचार
क्या राम्रो कालिञ्चोक ! [फोटोफिचर]
पुस २९, २०७६ सुबास हुमागाईं
दोलखा — जाडो बढेसँगै उच्च पहाडी र हिमाल भूभागहरु हिउँले डम्म ढाकिएका छन् । दोलखाको कालिञ्चोक पनि हिउँ परेपछि हेर्नलायक बनेको छ । काठमाडौंबाट हिउँ हेर्न र खेल्नेहरुको पहिलो रोजाईको गन्तव्य नै कालिञ्चोक भएको छ ।
पछिल्ला दिनहरुमा चिसोबढेसँगै कालिञ्चोकमा हिउँ पनि बढेको छ । हिउँ बढेपछि आन्तरिक पर्यटकहरु पनि बाक्लिएका छन् । केबलकारका साथै आरामदायी होटलहरुको व्यवस्थापन हुँदा यहाँ घुम्न आउनेहरु पनि खुसी देखिन्छन् । तस्बिरमा हेर्नुहोस् हिउँले ढाकिएपछिको क्या राम्रो कालिञ्चोक !
प्रकाशित : पुस २९, २०७६ १८:१९
राष्ट्रिय राजनीतिमा अलि अलि जटिलता छ : दाहाल
काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय राजनीतिमा जटिलता आएको बताएका छन् । चितवनको माडी नगरपालिकामा आयोजित खिचरा महोत्सव उद्घाटन कार्यक्रममा दाहालले राष्ट्रिय राजनीतिमा जटिलता आएको बताएका हुन् ।
'कहिलेकाँही केन्द्रीय राजनीतिमा अलिअलि जटिलता देखा पर्छन् । काठमाडौंमा अलिअलि जटिलता छन् । मलाई समयको निक्कै दबाब थियो । जटिलता समाधान गर्नका लागि लगातार छलफल गर्नुपर्ने थियो । यस्तो बेला बाहिर नजान साथीहरुले भन्नुभएको थियो,' दाहालले भने ।
आफूलाई दबाब दिने राष्ट्रिय राजनीतिको जटिलता के हो भन्नेचाहिँ उल्लेख गरेनन् । सभामुख चयनलाई लिएर नेकपामा संघर्ष छ । दाहाल आफैंले पूर्वमाओवादीले सभामुख पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । उनीमाथि पूर्वमाओवादीका नेताले सभामुख छोड्न नहुने दबाब दिँदै आएका छन् । अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउनुपर्ने अडान लिएका छन् ।
उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आफू स्वतः सभामुख बन्नुपर्ने दाबी गर्दै आएकी छन् । उनले आफूलाई सभामुख नबनाउने भए उपसभामुखबाट राजीनामा नदिने अडान लिएकी छन् । उनले नेकपाको सचिवालय बैठकले पदबाट राजीनामा दिन गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै हटाउन चुनौती दिएकी छन् ।
यसैबीच चितवन पुगेका दाहालले राष्ट्रिय राजनीतिमा दबाब उत्पन्न भएको बताएका हुन् । त्यसबारे आज साँझ बालुवाटारमा दुवै अध्यक्ष र अन्य नेताहरूबीच छलफल हुन लागेको छ ।
दाहालले नेपाललाई समृद्ध र सुखी बनाउने राष्ट्रिय आकांक्षाका साथ पार्टी नेतृत्व अगाडि बढेको पनि बताएका छन् । सरकार र पार्टीलाई यतिबेला अवसर र चुनौती दुवै रहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रकाशित : पुस २९, २०७६ १८:०३